ဗီတာမင် K နှင့်အတူအစားအစာများ: ဒီအကျိုးရှိသောအာဟာရကိုမည်သို့ရရှိမည်နည်း စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ဗီတာမင် K နှင့်အတူအစားအစာများ
သင်ကျန်းမာသောအစားအစာရရှိရန်အတွက်ဗီတာမင် K နှင့်အတူလုံလောက်သောအစားအစာများထည့်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ လေ့လာမှုအရ၊ ဤအာဟာရသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အားကျန်းမာစေသည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်စေသည်.
ရှာဖှေတှေ့ သင်၏နေ့စဉ်ဗီတာမင် K လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ကျန်းမာသောအစားအစာများ (နေ့စဉ် 75 mcg ကိုအကြံပြုပါသည်):
ဗီတာမင် K သည်သင်၏အစားအစာတွင်ပါဝင်သင့်သော်လည်းအဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဒီအာဟာရဓာတ်ကဘယ်လိုအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သလဲ။ သုတေသနပြုချက်အရဒီဗီတာမင်ဟာကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုတယ်။ သူ့အတွက်ကောင်းပါတယ် အရိုးအခြေအနေ, သွေးလည်ပတ်မှုနှင့်နှလုံး.
အခြားအရေးပါသောအာဟာရဓာတ်များနည်းတူ၊ ဗီတာမင်ကေရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအစာအာဟာရအုပ်စုတွင်ကြွယ်ဝသောအစားအစာကိုစားပါက၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်လူတိုင်းအတွက်မလွယ်ကူသောကျန်းမာသောအစားအစာကိုအောင်မြင်စွာထူထောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်သင့်အားဂုဏ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤရိုးရှင်းသော်လည်းအရေးကြီးသောအချက်ကသင်သည်ဤအာဟာရအလုံအလောက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဗီတာမင် K အတွက်အချမ်းသာဆုံးရွေးချယ်စရာပူဇော် သူတို့ကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
သငျသညျဗီတာမင် K ကိုပိုမိုစားသုံးရန်လိုလျှင်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို brussels ပင်ပေါက်လိုစဉ်းစားပါ။ ဒီအဟာရဟာကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးစာရင်းထဲမှာပါပြီး၎င်းဗီတာမင်မှာပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာဟာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်အခြားအစားအစာကိုဗီတာမင်ကေ၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်လိုပါကပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ကညွတ်၊
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်၏ဟင်းလျာများသို့အချို့ parsley ရွက်များကိုထည့်ပါ အဓိကအစားအစာသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမဟုတ်သည့်အခါ၎င်းသည်ဗီတာမင်ပမာဏများများရရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
သင်သိသည့်အတိုင်း၊ သင်၏အစားအစာတွင်အရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပျောက်ဆုံး။ မရပါ။ ဤအစားအစာအုပ်စုသည်သင့်အားဗီတာမင်ကေအပါအ ၀ င်ဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုအမြောက်အများကိုအာမခံပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤဗီတာမင်၏နေ့စဉ်ဆေးပမာဏကိုတိုးမြှင့်လိုပါကသစ်သီးဟင်းရွက်များပေါ်တွင်သင်၏လောင်းကစားကိုအားဖြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့်ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့်ရေလှိုင်းများကဲ့သို့သောသစ်ရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အလှူငွေသည်အထူးမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။.
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်စရာတွေဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်သတိရဖို့ရှိသည် kale သည်ဗီတာမင် and နှင့်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရနှစ်မျိုးလုံး၏contributionရာမပါဝင်မှုကိုဖော်ပြသည်ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏အပတ်စဉ်စျေးဝယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည့်အခါ၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်အလွန်ထိုက်တန်သည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်ဗီတာမင်ကေ (အမြင့်ဆုံး) ကိုအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းအာဟာရသည်ဤအစာအာဟာရအတွက်သီးသန့်မဟုတ်ပါ။ သစ်သီးအချို့သည်သင့်အားဤဗီတာမင်ပမာဏအနည်းငယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းရှုထောင့်တစ် ဦး အာဟာရအချက်အနေဖြင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့။ အရေအတွက်သည်သေးငယ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့အတွက်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကသင့်ကိုတစ်နေ့လုံးအိမ်မှဝေးကွာသွားစေမည်ဆိုပါက၎င်းတို့သယ်ဆောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ထို့ကြောင့်သင်အိမ်၌ချက်ပြုတ်ရန်သို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်၌စားရန်အခွင့်အလမ်းရသောအခါဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်အလွန်ကောင်းသည် ဤအသီးသည်သင်ရုံး၌ရှိစဉ်သို့မဟုတ်အားကစား၌ပြုလုပ်သောအခါဗီတာမင်ကေ (ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အခြားအရေးပါသောအာဟာရများ) ကိုထပ်ဖြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကူညီပေးသည်။။ ယခုမှာသဘာဝအသီးဖျော်ရည်များဝတ်စားဆင်ယင်လာပြီဆိုလျှင်သင်၏နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စများကိုသွားနေစဉ်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစားရန် ပို၍ လွယ်ကူသွားသည်။
ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ ဗီတာမင်စီပါဝင်သောအစားအစာများ။ ဤအရေးကြီးသောအာဟာရအတွက်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အစားအစာများကိုထိုနေရာတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။
သို့သော်မည်သည့်အသီးများတွင်ဗီတာမင်ကေရှိသနည်း။ အလွန်လူကြိုက်များသော (ဒါကြောင့်သင်ပုံမှန်စားလေ့ရှိခြင်းကြောင့်) avocado, ဗီတာမင် K အတွက်အချမ်းသာဆုံးအသီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဗီတာမင်ကေကြွယ်ဝသောအစားအစာကိုသင်စားလိုပါကသင်၏စျေးဝယ်လှည်းထဲသို့ထည့်ရန်စိတ် ၀ င်စားသောအခြားအသီးများလည်းဤသည်မှာ Plum, စပျစ်သီး၊ သလဲသီး၊ ကီဝီနှင့်ပန်းသီးများဖြစ်သည်။ ။ နည်းပညာပိုင်းအရသူတို့သည်သီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘလူးဘယ်ရီ၏ပါဝင်မှုကိုလည်းဖော်ပြရမည်။
ဗီတာမင်ကေနှင့်အခြားအစားအစာများကိုအနည်းငယ်ထောက်ပံ့ပေးသောအစားအစာများရှိပါသည် ယင်း၏ပျက်ကွက်မှုကိုကာကွယ်ရန်ရောက်လာသောအခါပိုမိုပေါင်းစပ်လိုက်လျှင်ကောင်းလေကောင်းလေဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါများသည်ကိုက်ခဲခြင်း (သို့) ထောပတ်သီးထက်နည်းသည်၊ သို့သော်ရိုက်ချက်တိုင်းသည်
canola ဆီကိုချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်နည်းဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆော်လမွန်ငါးပုစွန်များနှင့်အဓိကအားဖြင့်စည်သွပ်ဘူးများမှာမီးမောင်းထိုးပြသင့်သောငါးများဖြစ်သည် ဗီတာမင်ကေပမာဏအရ
အကယ်၍ သင်သည်အခွံမာသီးကိုကြိုက်လျှင် (သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များပေးသည့်အရာတစ်ခုခု) သီဟိုand်ပင်နှင့်ထင်းရှူးအခွံမာများသည်ဤဗီတာမင်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » ဗီတာမင် K နှင့်အတူအစားအစာများ